DEG DEG:- Dagaal aad u xoogan oo haatan ka soconaaya Gaalkacyo iyo xaaladda halkaasi oo kacsan – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Dagaal aad u xoogan oo haatan ka soconaaya Gaalkacyo iyo xaaladda halkaasi oo kacsan
Wararka haatan naga soo gaaraya gobolka Mudug ayaa waxay sheegayaan in galbeedka magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug uu goordhaw ka bilawday dagaal aad u xoogan oo u dhaxeeya ciidamo ka kala tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland.
Dagaalkaasi oo la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa markiisi hore ku bilaawday rasaas goos goos ah, wuxuuna markii dambe isku badalay in labada dhinac ay isku adeegsadaan hubka waaweyn oo haatan qeybaha kala duwan ee magaalada Gaalkacyo laga maqlaayo.
Dagaalka ayaa haatan ka soconaaya galbeedka magaalada Gaalkacyo, waxaana ilaa iyo haatan la ogeyn qasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkaas.
Ciidamada kala taabacsan maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa maalmihii ugu dambeysay isku hor-fadhiyay galbeedka magaalada Gaalkacyo, waxaana xiisadaha dagaal ee u dhaxeeya labadaasi dhinac uu noqday mid dhowr jeer kusoo noq-noqda deegaanada ku yaala gobolka Mudug.
Dadka ku sugnaa galbeedka magaalada Gaalkacyo ayaa dhowr maalmood kahor isaga qaxay galbeedka magaalada Gaalkacyo, kuwaaso oo u barakacay qeybaha kale ee ka tirsan magaalada Gaalkacyo.
Xaaladda magaalada Gaalkacyo ayaa maanta ah mid aad u kacsan, waxaana gebi ahaan magaalada laga maqalayaa hubka culus ee daran-dooriga u dhaca iyo rasaas badan, lamana oga qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi, maadaama uu weli socdo.